नयाँदिल्ली — नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तीनदिने भारत भ्रमणका लागि बिहीबार दिउँसो दिल्ली आइपुगेका छन् । दिल्ली उत्रिए लगत्तै उनी भेटघाटमा व्यस्त भएका छन् । फाइल तस्बिर दाहालले बिहीबार साँझ भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग भेट गरेका छन्। भारतको सुरक्षा तथा विदेश मामिलामा डोभल प्रभावशाली…
कञ्चनपुर — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरको भीमदत्त २, उल्टाखामकी १३ वर्षीया निर्मला पन्त हत्याको प्रारम्भिक अनुसन्धामा व्यापक त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको छ । महेन्द्रनगरमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगको प्रतिवेदन जानकारी गराउँदै प्रवक्ता मोहना अन्सारीसहित आयोगको प्रदेश कार्यालय…
काठमाडौँ — बंगलादेशले नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने भएको छ । उसले सन् २०४० भित्र ९ हजार मेगावाट नेपालबाट विद्युत खरिद गर्ने योजना अघि सारेको हो । बंगलादेशको उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको पावर डिभिजनले सार्वजनिक गरेको योजनामा नेपालबाट २०४० भित्र ९ हजार मेगावाट विद्युत आयात गर्ने उल्लेख छ । …
काठमाडौँ — पूर्णरुपमा राजनीतिमा लाग्न भन्दै नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् । नेपाल सरकार को १० औं तह(उपसचिव) पदमा कार्यरत श्रेष्ठले दिएको राजीनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हो । ३३ वर्ष स्वास्थ्य सेवामा काम गरेका डा श्रेष्ठ पछिल्लो समय काभ्रेपलाञ्चोक…
लण्डन — बेलायत सरकारले पछिल्लो समय अध्यागमन नियममा अत्यधिक परिवर्तन गरेको छ । भिषा प्रणाली जटिल बनाउँदै उसले सन् २०१० यता ५ हजार ७ सय भन्दा बढी नियम परिवर्तन गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सन् २०१० मा अध्यागमन नियम एक लाख ४५ हजार शब्द लम्बाइको रहेकामा अहिले यो संख्या झण्डै दोब्बर ३ लाख ७५ हजार शब्द बढाइएको…
काठमाडौँ — संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख अायुक्तमा नवीनकुमार घिमिरेलाई सिफारिस गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको परिषद्को बैठकले प्रमुख आयुक्तमा पूर्वसचिव घिमिरेको नाम सिफारिस गरेको हो । अख्तियारको कार्यवाहक प्रमुख रहेका घिमिरे संसदीय सुनुवाई पछि राष्ट्रपतिबाट…
कञ्चनपुर — कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ४२ दिन पुगिसक्यो । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको झण्डै डेढ महिना बितिसक्दा पनि घटनामा संलग्न दोषीको पहिचान हुन भने सकेको छैन् । शनिबार निर्मलाकी आमासँग भेटदै मन्त्री बिना मगर । तस्बिर : भवानी…
हेटौंडा — प्रदेश ३ मन्त्रिपरिषदको बैठक नै स्थगित गरेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको स्वागतमा सहभागी भएका छन् । मनहरी गाउँपालिका–९ रजैयामा रहेको अग्नीहोत्र आश्रमको कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका दाहालको स्वागतको लागि मन्त्रिपरिषद बैठक नै रद्ध गरिएको हो । …
काठमाडौँ — फोहोर संकलन गर्न सातामा ३ पटकसम्म आउने टयाक्टर र टिपर दुई सातासम्म नआउँदा घरभित्रै फोहोर कुहिन थालेको छ । राजधानीका सडकदेखि भान्सामै फोहोर थुप्रिएर दुर्गन्ध पनि फैलन थालेको छ । ललितपुरको लगनखेल बसपार्कमा थुप्रिएको फोहरको अगाडि फलफुल बेच्न बसेकाहरु । तस्बि : बिजु महर्जन/कान्तिपुर दुई सातासम्म गाडी…
काठमाडौं - अब छोरीले पनि छोरा सरह अंश पाउने भएका छन् । भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता ऐनले अब छोरीलाई पनि अंशबण्डाको समान हकदार बनाएको हो । संहिताको परिच्छेद १० को अंशवण्डा सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा २०५ मा सगोलको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्ने प्रयोजनको लागि पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी सबै अंशियार मानिने उल्लेख…
डा. दीक्षित भन्छन् : चिकित्सकले धर्म छाडे, पैसाको मात्रै पछि लागे
काठमाडौँ : डा. सुन्दरमणि दीक्षितले चिकित्सकहरुले विरामी, दुखी र निमुखाको उपचार पाउने अधिकारविरुद्ध गएर आन्दोलन गर्नु गलत रहेको बताएका छन् । रेडियो अन्नपूर्ण नेपालको कार्यक्रम मूलप्रवाहमा ठाकुर बेलबासेसँग कुरा गर्दै उनले चिकित्सकहरुको धर्म सडक आन्दोलन र अनशन हुनै नसक्ने बताए । ‘चिकित्सकहरुले कहिले…